Pilotတစ်ယောက်ရဲ့ အတွေ့အကြုံမျိုးကို ရယူခံစားလိုပါသလား? ဝေဟင်မှာ Professional Pilot နဲ့အတူ (၆)ရက်တာပျံသန်းပြီး ကမ္ဘာမြေရဲ့ အလှတရားတွေကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးရှိလို့နေပါပြီ…. - Crown Education
Pilotတစ်ယောက်ရဲ့ အတွေ့အကြုံမျိုးကို ရယူခံစားလိုပါသလား? ဝေဟင်မှာ Professional Pilot နဲ့အတူ (၆)ရက်တာပျံသန်းပြီး ကမ္ဘာမြေရဲ့ အလှတရားတွေကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးရှိလို့နေပါပြီ….
သင့်အနေနဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ လေယာဉ်မောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားနေသူဆိုရင် စွန့်စားလိုစိတ်၊ လေ့လာလိုစိတ်တွေအပြင် Pilotတစ်ယောက်မှာ ရှိထားသင့်တဲ့ အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေကို စာတွေ့+လက်တွေ့ အနီးကပ်လေ့လာသင်ကြားခွင့်ရမယ့် အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။
6 Days Pilot Experience Short Course သင်ကြားမှုမှတစ်ဆင့် ကိုယ့်အနေနဲ့ Pilotတစ်ဦးအဖြစ် လေယာဉ်တစ်စင်း ကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ မောင်းနှင်လိုတာလား? လေယာဉ်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အကြောင်းကို စနစ်တကျလေ့လာပြီး ပြန်လည်အသုံးချလိုတာလား? စတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဝါသနာအစစ်အမှန် ကိုပါ သိရှိသွားရမှာပါ…
အဆိုပါ (၆)ရက်တာ ပျံသန်းမှုကို ဘယ်မှာသင်ကြားရမလဲ? ဘာတွေလေ့လာခွင့်ရမလဲ?
Aviation Course, Aircraft Maintenance နဲ့ Engineering ဘာသာရပ်တွေသင်ကြားရာမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ Siam Technology Collegeမှာ (၆)ရက်တာ သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်6Days Pilot Experience Short Course သင်ကြားမှုမှာ ပါဝင်မယ့်အရာတွေကတော့ – Introduction to Pilot, Computer Simulation, Ultralight Aircraft Flying, Cessna 152/172 Flying, Thai Cultural Attractionsတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်6Days Pilot Experience Short Course သင်တန်းတက်ရောက်မယ့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေအတွက် Siam Technology College မှ Uniform, Pilot Uniform, Hat, Logo Pin, Certificate, Free Flying Experience, Accommodation, Meals Planနဲ့ Local Transportationတွေကိုလည်း ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
6 Days Pilot Experience Short Course က ဘယ်တော့စမှာလဲ? ဘယ်လောက်ကျသင့်မလဲ?
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ရက်နေ့မှ ၂၃ရက်နေ့အထိ သင်ကြားရမှာဖြစ်ပြီး USD 2100 ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။6Days Pilot Experience Short Course ကိုလျှောက်ထားလိုသူများ အနေဖြင့် CROWN Educationမှတစ်ဆင့် လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ6Days Pilot Experience Short Course အသေးစိတ်အကြောင်းအရာများကို CROWN Education Office အမှတ် ၂၇၅ ၊ ၃ လွှာ ၊ ကမ္ဘောဇတာဝါ ၊ မြေနီကုန်း ကုန်းကျော်တံတားအနီး ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ✆ ဝ၁ ၅၂၇ ၈၃၈ ၊ ဝ၉ ၄၄ ၅၅ ၆၆ ၇ဝ၁၊ ဝ၉ ၄၄ ၅၅ ၆၆ ၇ဝ၂ သို့ရုံးချိန်အတွင်းလေး ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ SIAM TECH COLLEGE ၏6Days Pilot Experience Short Course သည် Pilotသင်တန်းမဟုတ်ပါ…ဝေဟင် အတွေ့အကြုံရရှိနိုင်ရေးအလို့ဌာ ပြင်ဆင်ပေးသည့် သင်တန်းသက်သက်သာဖြစ်ပါသည်။
Expand Your Global Knowledge (University of Mahidol)
Free AirTicket to Study in Singapore & Thailand